Tilmaamaha Falcelinta Cunsurka ee Saamaynta Genshin | Forum Mobile
Jose Albert | 13/05/2022 22:18 | La cusbooneysiiyay 13/05/2022 22:38 | Ciyaaraha
Kuwa aan aqoon u lahayn «Saamaynta Genshin», waxaa muhiim ah in la ogaado in tani ay tahay a ciyaarta tacaburka furan ee adduunka, kaas oo u taagan inuu yeesho Naqshad soo kicinaysa oo hufan (muuqaal muuqaal ah), oo leh animations qulqulaya oo qurux badan wakhtiga dhabta ah.
Sidoo kale, gudaha Saamaynta Genshin, jilayaasha (isticmaalayaasha) inta badan waxay matalaan ilaa 7 walxood oo kala duwan, taasoo ah ahaansho Marka la isku daro, waxay keenaan falcelino kala duwan.. Kaas oo ka caawiya ka qaybgalayaasha kooxda inay ka guulaystaan ​​kuwa kale. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa curiyeyaasha ka jira ciyaarta, iyo waa maxay isku darka sababa falcelisyada qaarkood (awoodaha) si uu u guulaysto. Oo halkan, waxaan ku tusi doonaa hagaha falcelinta aasaasiga ah qabow si loo gaaro yoolkaas.
Iyo sida caadiga ah, ka hor intaanan u gelin daabacaadan hadda taagan qodob aad u la xidhiidha videogames, si gaar ah oo ku saabsan dunida-furan, cross-platform doorka-ciyaarista fiidyaha ciyaarta loo yaqaan «Saamaynta Genshin», waxaan u dhaafi doonaa kuwa xiiseynaya isku xirka qaar ka mid ah our qoraallo hore oo la xiriira oo la mid ah. Si ay si sahal ah wax ugu qabtaan, haddii ay rabaan inay kordhiyaan ama xoojiyaan aqoontooda ku saabsan, dhammaadka akhrinta daabacaadan:
"Waxa la bilaabay sanadka 2020, ciyaartan oo gabi ahaanba ku imanaysa bilaash oo ay la socoto lacag-bixinno yaryar oo gudaha ah. Waxaa laga yaabaa in aan filano caajisnimo, ciyaar miisaaniyad yar, laakiin gabi ahaanba ma aha, waxay ahayd mid ka mid ah RPG-yada ugu dulqaadka badan sanadkaas. Quruxdeedu waxay aad u xasuusataa Nintendo's Zelda Neefta Duurjoogta. Waa wax qabatimo, dheer oo aad u xiiso badan, shaki la'aan waa ciyaar nagu ilaalin doonta inaan ku xirno annaga oo aan qarashgareyn hal euro". Ciyaaraha doorka ugu fiican ee kombuyuutarka
Ciyaaraha ugu fiican ee PC ku habboon kontaroolayaasha
1 Saamaynta Genshin: Ciyaar muuqaal ah oo leh falcelinno aasaasi ah
1.1 Waa maxay falcelinta asaasiga ah ee Saamaynta Genshin?
1.2 Tilmaamaha Isticmaalka: Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo falcelinta Cunsurka?
1.3 Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ciyaarta
Saamaynta Genshin: Ciyaar muuqaal ah oo leh falcelinno aasaasi ah
Waa maxay falcelinta asaasiga ah ee Saamaynta Genshin?
In uu degel rasmi ah gudahood Dukaanka Google Play, u fiirso 7 qodob oo kala ah:
“Dhulkan ay cansureyaashu isugu yimaadaan, dunidu waxa ay ka kooban tahay toddoba walxood oo kala ah: Anemo, Electro, Hydro, Pyro, Cryo, Dendro, iyo Geo. Jilayaasha leh Aragtida waxay xakameyn karaan walxahan dagaalka ama marka la baarayo. Isku darka Hydro iyo Pyro waxay abuurtaa falcelinta uumiga; isku darka Pyro iyo Electro waxay abuurtaa falcelinta culayska badan; iyo marka Electro iyo Hydro la isku daro, fal-celin koronto ah ayaa dhacda. Furaha guushu waa in la isticmaalo walxo kala duwan oo ka dhan ah cadawga kala duwan, sidaas darteedna aad gacanta ku dhigto dagaalka."
Si kastaba ha ahaatee, kuwan soo socda ayaa lagu dari karaa si tafatiran oo ay u dhamaystiraan macluumaadka la xidhiidha canaasirta:
Anemo: Cunsurka la xidhiidha hawada.
Geo: Cunsurka la xidhiidha dhulka.
Elektaro: Cunsurka la xidhiidha korontada.
Cyo: Cunsurka ku xiran barafka.
Dendro: Cunsurka la xidhiidha dhirta.
Pyro: Cunsurka la xidhiidha dabka.
Hydro: Cunsurka la xidhiidha biyaha.
Sidaynu horeba u sheegnay. Dabeecad kastaa waxay la xidhiidhaa curiye gaar ah, sida hoos ka muuqata:
kamisato ayaka: Cyo.
KUJOU SARA: Electro
SHOGUN RAIDEN: Electro
YAA MIKO: Electro
Ciyaaraha tacaburka ugu fiican ee PC
Tilmaamaha Isticmaalka: Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo falcelinta Cunsurka?
Ogaanshaha hadda, walxaha jira ee ciyaarta iyo walxaha la xidhiidha dabeecad kasta, taabo ogow oo baro falcelinta dugsiga hoose abuuray iyadoo la isku daray mid kasta oo ka mid ah curiyeyaasha. Oo kuwani waa kuwan soo socda, ee soo socda: Falcelinta Cunsurka: Walxaha la isku daray -> saamayn soo saaray
Barro: Geo + Hydro -> Waxay keentaa in dhaqdhaqaaqa cadawgu hoos u dhaco iyo sidoo kale xawaaraha weerarkooda.
Burbur: Geo + Cryo, Electro, Hydro ama Pyro -> Waxay abuurtaa gaashaan, kuwaas oo yareeya waxyeelada asaasiga ah ee la gaaro.
Dhalaalay: Cryo + Pyro -> Waxay wax ka qabataa dhaawac dheeraad ah, iyadoo ku xiran walxaha kiciya.
Kala daadsan: Geo + Cryo -> Waxay sababtaa kororka fursadaha fulinta weerar halis ah.
Koronto: Electro + Hydro -> Waxay kuu ogolaanaysaa inaad gaysato waxyeelo koronto oo joogto ah muddo wakhti ah.
Qodax: Geo + Dendro -> Waxay sababtaa dhiigbaxa cadawga la weeraray oo waxay abuurtaa dabino fiiqan oo dilaa ah.
Powder: Geo + Anemo -> Waxay soo saartaa saamaynta cadawga.
Guba: Dendro + Pyro -> Waxay kuu ogolaanaysaa inaad gaysato waxyeelo dab ah oo joogto ah muddo wakhti ah.
Culays xad dhaaf ah: Electro + Pyro -> Waxay ku abuurtaa saameyn qarax leh dhaawaca Pyro AoE kaas oo jebiya gaashaanka Geo.
Kormeeraha sare: Cryo + Electro -> Waxay abuurtaa waxyeello Cryo AoE ah taas oo yaraynaysa difaaca cadowga.
Dabayl: Anemo + Element Kale -> Wuxuu miisaamaa curiyaha oo u soo celiyaa sida dhaawaca aasaasiga ah.
Uumi bax: Hydro + Pyro -> Waxay wax ka qabataa waxyeello dheeraad ah, iyadoo ku xiran walxaha kiciya.
Veneno: Dendro + Hydro -> Waxay soo saartaa waxyeellada asaasiga ah ee nooca sunta ah AoE (waxyeellada aagga).
Duufaan: Cryo + Hydro -> Waxay sababtaa qaboojinta bartilmaameedyada. Sidoo kale sababa jabka.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ciyaarta
Si aad u ogaato faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ciyaarta, jilayaasha, falcelinta aasaasiga ah iyo in ka badan, waxaad booqan kartaa degel rasmi ah ee ciyaarta fiidiyowga.
"Genshin Impact waa ciyaar tacabur caalami ah oo furan, taas oo macnaheedu yahay in laga bilaabo wakhtiga aad cagta saartay qaaradda Teyvat, inta aad si sax ah u cabbirayso awooddaada, waxaad ogaan doontaa muuqaalo cusub, dhib ma leh haddii aad ka gudubto buuraha ama ka gudubto webiyada. ” Adduunka furan, xorriyadda sahaminta / Saamaynta Genshin dukaanka epic
Marka la soo koobo, tan cajiibka ah oo madadaalo leh adduun-furan, ciyaar-door-ciyaareed iskutallaab ah loo yaqaan «Saamaynta Genshin» Waxay sii wadaa inay qabato dareenka taageerayaasha ciyaarta fiidiyowga. Waxaas oo dhan ka sarreeya, waayo Dhaqdhaqaaqa isticmaalka falcelintiisa asaasiga ah.
Kuwaas oo aad muhiim ugu ah dagaalka. Sababta sababta, hubaal hagahan yar ayaa dad badan ka caawin doona si degdeg ah wax u baro oo wax u barto noocee ah saamaynta ay awood u yeelan doonaan in ay abuuraan oo ay isticmaalaan, ku salaysan ciyaaryahanka la isticmaalo, iyo iyada oo la socota mid ka mid ah jilayaasha kala duwan ee jira. Oo sidaas daraaddeed, awoodda ku guulaysta dagaalo badan si degdeg ah oo waxtar leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Tilmaamaha Falcelinta Cunsurka ee Saamaynta Genshin
Sida loo helo kaarka weerarka fog ee bilaashka ah ee Pokémon Go